Tsy hisy Java intsony avy any Oracle ao Ubuntu | Avy amin'ny Linux
Tsy hisy Java intsony avy any Oracle ao Ubuntu
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Fitsinjarana, GNU / Linux, About us, fandaharana
Namaky ity vaovao ity aho avy amin'ny tranonkala iray ato amin'ny fireneko, izay zaraiko aminao:
Tsy ela akory izay Oracle nanidy ny fahazoan-dàlana izay namela ny antoko fahatelo hizara ny fanangonany Java malalaka.
Ny fonosana Java ho an'ny Ubuntu dia hita miaraka amin'ireo anarana sun-java6- *. Ny fanidiana ny Oracle dia nahatonga ny tranga Ubuntu fa ny kinova farany nananan'izy ireo momba ny JDK dia nafindra tany amin'ny toeran'ny mpiara-miombon'antoka aminy, saingy nanomboka tamin'izay fotoana izay Aogositra-2011, tsy afaka nanavao ny kinova Java intsony izy ireo tao amin'ny toerany.
Hita fa vao haingana i Oracle no nanambara maro ny fahalemen'ny Java, izay hararaotin'ireo mpanafika matetika, ary ireo olana manahirana ireo dia misy ao amin'ny kinova Java izay ao amin'ny repositories Ubuntu ao anaty fonosana sun-java6. Saingy satria tsy afaka mamoaka ara-dalàna ny fanavaozana ireo fonosana ireo ny Canonical ary noho ny fahalianany amin'ny fiarovana ny fiarovana ny mpampiasa azy, dia nanapa-kevitra ny hanaisotra ireo fonosana ireo avy amin'ny toerany mandrakizay izy ireo, mamela ny mpampiasa ho ny safidy fampiasana openjdk, ny kinova Java maimaim-poana.
Vokatr'izany, Canonical dia hametraka fonosana sun-java6 tsy misy ao amin'ny repos Ubuntu, izay hiteraka mpampiasa rehefa manatsara ny endrik'ilay Oracle Java napetrak'izy ireo teo alohaNoho izany dia tokony handeha haingana araka izay azo atao izy ireo amin'ny OpenJDK izay ao amin'ny repos Ubuntu. Tsy mbola fantatra ny daty hahatongavan'izany fa fiovana izay hitranga tsy ho ela.
Ny torohevitro dia ny hampiasa ny OpenJDK ary raha miankina amin'ny bizina Oracle fotsiny ianao dia ampidino avy amin'ny tranokalan'ny ofisialin'izy ireo.
Fanambarana Canonical azo vakiana amin'ity rohy ity. Na izany na tsy izany dia avelako ho voambolana izy ireo:
Ny archive mpiara-miasa Canonical dia misy fonosana Oracle's Sun Java JDK (sun-java6) ho an'ny Ubuntu 10.04 LTS, Ubuntu 10.10 ary Ubuntu 11.04. Hatramin'ny 24 Aogositra 2011, tsy manana fahazoan-dàlana hizara indray ny fonosana Java vaovao intsony izahay satria i Oracle nisotro ronono ny “Lisansa mpizara distrika ho an'ny Java”  . Oracle dia namoaka mpanolotsaina iray momba ny olana ara-piarovana ao amin'ny kinova Java izay ananantsika ao amin'ny arisivan'ny mpiara-miasa . Ny sasany amin'ireto olana ireto dia manararaotra any an-ala ankehitriny. Noho ny hamafin'ny loza mety hitranga amin'ny fiarovana, Canonical dia mamoaka avy hatrany ny fanavaozana ny fiarovana ny plugin Sun JDK browser izay hampiato ny plugin amin'ny masinina rehetra. Hanalefaka ny loza mety hitranga amin'ny mpiserasera amin'ireo tranonkala manararaotra manararaotra ny kinova Sun JDK marefo izany. Amin'ny ho avy tsy ho ela (daty marina TBD), Canonical dia hanaisotra ny fonosana Sun JDK rehetra ao amin'ny archive Partner. Hatao izany amin'ny alàlan'ny fanosehana fonosana poakaty mankany amin'ny arisiva, mba hialana amin'ny masinin'ireo mpampiasa rehetra ny Sun JDK rehefa manao fanavaozana lozisialy izy ireo. Ireo mpampiasa an'ireto fonosana ireto izay tsy nifindra tany amin'ny vahaolana hafa dia hiaina tsy fahombiazana rehefa avy nanaisotra ny Oracle Java tamin'ny rafitra ireo fanavaozana ny fonosana. Raha mampiasa ny fonosana Oracle Java ianao izao dia manana safidy roa: 1- Ampidiro ireo fonosana OpenJDK izay omena ao amin'ny archive Ubuntu. (plugin icedtea6-plugin an'ny plugin browser, openjdk-6-jdk na openjdk-6-jre ho an'ny milina virtoaly) 2- Ampidiro amin'ny tanana amin'ny Internet ny lozisialy Java avy amin'ny Oracle . Raha mila fanazavana fanampiny, azafady mba jereo ny pejy wiki momba ilay lohahevitra . Miala tsiny izahay noho ny fanelingelenana mety haterak'izany, ary misaotra anao noho ny fahazoanao.  - http://jdk-distros.java.net/
[roa] - http://robilad.livejournal.com/90792.html
[roa] - http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/javacpuoct2011-443431.html
[roa] - http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
[roa] - https://wiki.ubuntu.com/LucidLynx/ReleaseNotes/Java6Transition
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Tsy hisy Java intsony avy any Oracle ao Ubuntu
Antenaina amin'ny fihetsika manimba izay ananan'i Oracle manoloana rindrambaiko maimaimpoana.
Nametraka ny tenako ho toy ny asa aho hahitako hoe manao ahoana ny PostgreSQL, tsy haiko izany ... fa ny MySQL dia hitako fa tandindomin-doza koa izy io.
Io MySQL an'ny Oracle io dia zavatra iray mampijoro ny voloko ¬_¬
misy koa MariaDB, izay araka ny novakiako dia efa lasa lavitra.
Tiako ny PostgreSQL fa raha avy amin'ny MySQL ianao, ny zavatra akaiky indrindra misy (ary mifanentana tanteraka koa, dia fork-by-taratasy iray) dia MariaDB.
Izany no zavatra hita fa avy amin'ny openoffice, fantatra ny tetika fameperana pseudo-n'i Oracle.
Heveriko fa hanaraka ireo dingana ireo ihany i Mysql, ny safidy hafa dia mety PostgreSQL na ilay kinova maimaim-poana an'ny Mysql novolavolain'ny mpamorona azy manokana MariaDB.
Jose VASQUEZ dia hoy izy:
Ny PostgresQL dia tsara lavitra noho ny MySQL. Isaky ny tianao ianao dia manampy anao amin'izay ilainao aho cibercol@gmail.com
Valiny tamin'i Jose VASQUEZ
Mampiasa openjdk amin'ny debian aho ary tsy misy olana, ary ho an'ny rindranasa tranonkala plugin iray antsoina hoe icedtea, maimaim-poana daholo amin'ny debianako 100% maimaim-poana
zOdiaK dia hoy izy:
Toy ny tsy mitonona anarana, tsara rehetra eto ambanin'ny masoandro Debian ...
Mamaly an'i zOdiaK
Ny fihetsika Canonical dia toa tsy mitombina, tena toa ny Mac.Fa manohana azy ireo aho satria tsy afaka i Java ankehitriny ary ny Open JDK dia efa tena mahay. Mbola mieritreritra aho fa mandray fanapahan-kevitra manokana ny Canonical, saingy tokony hamonjy ny zava-misy fa nanoro hevitra an-kolaka sy an-tsipiriany izay kasain'izy ireo hatao izy ireo ary ny fomba hataon'izy ireo, raha jerena ireo fomba hafa azo ampiasaina sy mangarahara (raha ny fantatsika). Tsy nanana an-tsipiriany momba ny fotoana izy ireo.
Heveriko fa na mbola tsy namaky ny vaovao tsara ianao, na tsy azonao ilay izy:
"Oracle dia nanidy ny fahazoan-dàlana namela ny antoko fahatelo hizara ny Java compiles malalaka"
Rehefa manavao ny version 7 amin'ny win32 dia tsy nisy fanavaozana ny ubuntu. Tsy maintsy nampidina jdk 7 avy tao amin'ny pejy Oracle aho ary io no ampiasaiko, vao hitako fa misy openjdk 7.
Toa tsy mety amiko raha nikatona ny kaody izy ireo, saingy toa ratsy kokoa tamiko ny naneren'i Dadatoa Marka sy ny forongony anay hanala programa iray ary hampiasa programa hafa satria apetraka ao anaty fika io.
Izany no fanapahan-kevitra mety araka ny hevitro, noho ny olana ara-piarovana atolotry Java, noho ny toetran'ny GNU / Linux matanjaka sy azo antoka.
Tsy midika izany fa tsy azonao atao ny misintona ny mimari-droa ary manangona azy ... na hoe misy manao azy ary manao PPA.
Ny zavatra tokana dia ny tsy ahafahanao mametraka azy amin'ny alàlan'ny fametrahana apt-get tsotra na aptitude install
Ny lehilahy dia miaraka aminao dia tsy tsara tarehy amin'ny lafiny rehetra ... raha nanao izany izy ireo, satria manery anao, raha toa ka tsy nandray izany fanapahan-kevitra izany izy ireo dia hitaraina ianao satria: «i Dadatoa Mark dia mampiditra rindrambaiko ao amin'ny repos, rindrambaiko tompona ary ho an'ny Raha hametraka azy io dia tsy mametraka fanavaozana »… tongava LOL !!!
Ny zavatra tsara momba an'io rehetra io dia raha misy izany, OpenJDK dia hanana fivoarana lehibe atsy ho atsy 🙂
Ary farany, efa ela be io no tonga, toa tsy hisy intsony izany.
Andao hojerentsika, amin'izao fotoana izao ny openjdk dia lasa vokatra ofisialy ary ny oracle dia manokana bebe kokoa ho an'izany fampandrosoana izany, tsy ho an'ny olon-kafa izay nijanona nizara ilay jre XD ny oracle ..
Nimroda dia hoy izy:
Misy afaka manome torolàlana hanalana ny sunJDK ary hametraka openJDK?
Valiny tamin'i Nimrod
Ahoana ny fomba hifehezana ny findainao Android amin'ny PC-nao
Misy Razor-qt: Ny mifanila LXDE ao amin'ny QT